Sibhedlela "Mankent" - impilo engcono resort Kazakhstan
Omunye impilo izikhungo best of Kazakhstan, sibhedlela eziyinkimbinkimbi "Mankent Shipazhayy", esisogwini eningizimu yezwe e ibanga km-30 ukusuka edolobheni Shymkent.
I sibhedlela ngokukhethekile ukuphathwa:
ka ipheshana wokugaya ukudla;
izinhlaka iduna nensikazi uhlelo genitourinary;
emaphakathi kanye neuropathy isimiso sezinzwa;
lamanzi esiphethu - ngumgogodla ukwelashwa eyayenziwa esibhedlela "Mankent"
Isisekelo izinhlelo sibhedlela zokwelapha kuyinto lamanzi esiphethu, okuyindawo ehlanganisa efaneleka kakhulu umzimba chemical izakhi: sodium, iodine, nensimbi, isibabule, fluorine, chlorine ne uxhumano lokudlulisa. Inikeza Kazakhstan Mankentskoe indawo lapho ezikhishwe of 1210 amamitha ukujula. Umumo wamatshe amanzi 2.2 g / l, futhi izinga lokushisa yemvelo ifinyelela 38 ° C. "Mankent" The yokungcebeleka inikeza izivakashi amanzi ukuthi ayinayo iphunga ebukhali. Kuyajabulisa ukunambitheka, ngakho kusebenza zangaphakathi nezangaphandle ekwelapheni.
izinqubo Eyisisekelo kanye izinyathelo zokwelapha
Inombolo yomhlaba wonke yesikhungo kahle elise isakhiwo yezokwelapha, ehlanganisa:
balneotherapy nokuhlukaniswa pool (lapha kwenziwa izinqubo ezifana zokugeza amaminerali, Hydro, eshaweni, eshaweni kwamanzi futhi isiyingi, hood ovundlile umgogodla kwamanzi, ngenkasa emathunjini bese izinhlelo zangasese);
umnyango zokuxilonga (kuhlanganisa laboratory iKhabhinethi ultrasound,-X-ray, ECG nama-MRI);
Physiotherapy gumbi (lapha kukhona 22 izinhlobo simulators kanye nemishini ekhethekile ukulapha umzimba);
Futhi kulesi sibhedlela "Mankent" has nehhovisi layo zamazinyo, lapho kungenzeka nje kuphela ukwelapha amazinyo, kodwa futhi sokwenziwa ngokuphelele umlomo.
Le ndawo eziyinkimbinkimbi 12 m, eziningi zazo abekelwe zone ezisemadolobheni, lapho ekhula AmaConifers futhi izihlahla lezihlahla. Ngenxa yalesi endaweni amanga eziningi iziteshi engajulile Ak-Su emfuleni, lapho umoya humidified bese uba salubrious ngaphezulu.
On the indawo kukhona:
ezemidlalo namadlelo nokokuzilibazisa volleyball, ibhola, basketball;
amatafula table tennis, chess kanye Checkers;
Walks nge nemizila Terrenkur.
Ngaphezu kwalokho zokudlala kanye zokuhamba ku arbours epaki ahlelwe nge amatafula eyakhelwe namabhentshi, futhi eduze kwabo asethwe ne lamanzi esiphethu imithombo.
Njengomhlaba nezinye izikhungo zalolu hlobo, kulesi sibhedlela "Mankent" unaka kakhulu ukuba umsoco of ezigcemeni zabo. Isakhiwo kahle izindlu 2 yokudlela, sinikeza ezihlukahlukene Ukudla amamenyu akhiwa ukuhlala ngosuku-10.
Calorie ukudla esokuba okunomkhawulo izidingo izivakashi ngokuhlala nasekuzilibaziseni zokwelapha, futhi izinga imikhiqizo Akungabazeki - eMnyangweni kulesi sibhedlela okungokwalo abamba ukushisa kanye ukulimela ukuziphilisa yayo, lapho ekhishini angapheka ukudla kuhlanzekile futhi kuhle.
"Mankent" The yokungcebeleka linikeza izivakashi zayo okuningi futhi, sazi ukuthi zokwelapha kungase kube into njengoba ngempumelelo ngangokunokwenzeka uma kwenzeka ukuthi amaholide kukhona ohlakeni ezinhle kwengqondo isimo wenduduzo ngokwengqondo nokuzinza.
Ngaphandle imidlalo ithimba ezemidlalo endaweni evulekile, maphakathi ukuzijabulisa recitals "Duman" zibhekwa iqhaza izivakashi kulesi sibhedlela, amakhonsathi, imicimbi yamasiko, e-ballroom ivuliwe kusihlwa. Uma wayefisa, izivakashi angajoyina umtapo, abasebenza endaweni eyinkimbinkimbi futhi avuselelwa njalo nge wokuthengisa kahle entsha. nabo nethuba uya endaweni yokudlela noma coffee shop ukwengeza ezinye fun imenyu wezokudla.
Trip Centre uhlela ibhasi njalo futhi izinkambo ukuhamba ezikhangayo zomlando namasiko futhi yemvelo engafani Kazakhstan. Lezi uhambo oluthakazelisayo abakwazi kuphela ufunde mayelana nomlando kuleli zwe elikhulu, kodwa futhi ukuthola ubuhle labo, okuyinto abangazange okwamanje wakwazi ukuthola impucuko ikuyo yonke indawo.
Inhlangano kokuhlala kanye nenani amakamelo
Sibhedlela "Mankent", ogama isithombe ngokushesha amehlo, ikunikeza inani elikhulu ezihlukahlukene amakamelo. Ngakho, le ndawo 35 kuhlanganisa housings ngezinombolo 1-3 abahambi. Ngaphezu kwalokho, housings 18 isihlukene storey amakhaya, nge yokungena ehlukene, ekahle abaqavile emphakathini.
The yokungcebeleka enezinto eziningi ezahlukene amanani - kusukela amakamelo elula umnotho ukuze Suites zikanokusho futhi samakamelo amancane. Inombolo ephelele amabanga izihlalo 400 aphansi, the nobusika, futhi izihlalo 700 ehlobo.
Izindleko ngokuhlala kuleli yokungcebeleka kuxhomeke ezicini eziningana: isikhathi iphemithi, izimo zokuphila, khona izici ezengeziwe. Sibhedlela Mankent, kabani amanani ngokulinganisela ezingaphezu kuka zokungcebeleka abaningi eRussia, kuhlanganise emalini, hhayi kuphela ukudla nendawo yokulala, kodwa futhi yiziphi izinqubo zokwelapha, kanye nokungcebeleka kwamasiko. Kukhona ukuthi kungenzeka okuthenga amathikithi kwisayithi, kanye Ukubhukha kusasele tour ngosizo zezindaba inthanethi.
Segumbi akusho kuphela zincike bangaki abantu uklanyelwe (double noma eyodwa). Kuthinta ngaphezulu kanye nenani ifenisha, izinto zikagesi, etholakalayo egumbini. Cabanga izindleko cishe lamakamelo ehhotela, ancike enhlosweni yabo obusebenzayo:
Igumbi nge amakamelo amathathu okuqondene ekilasini lokuqala. It yakhelwe abantu ababili. Ikamelo has konke okudingayo: TV, air conditioning, isiqandisi, ikhabethe, lokulala, embhedeni, situlo, litafula nezihlalo, eshaweni. 11000
First Class Room Double. It ihlukile sangaphambilini kuphela khona hhayi abathathu kodwa ababili amakamelo. 9000
amakamelo amabili isigaba sesibili. Ikamelo has a TV, efrijini, yokugezela, air conditioning, imibhede olulodwa ezimbili. 8000
Igumbi Omunye yakhelwe abantu ababili. Kukhona imibhede emibili twin mazwi, indlu yangasese, lezingubo kanye etafuleni eliseceleni kombhede egumbini. 3800
"Mankent" - sibhedlela, ukubuyekezwa mayelana nokuthi iziphi izinhlelo ungafunda phezu eziningi izivakashi amasayithi kanye nezithangami. Ngaphezu kwalokho, iningi lazo omuhle. Isakhiwo kahle kakhulu elise - eduze esiteshini sesitimela Mankent lapho ibhasi ungafinyelela emzaneni Aksukent (onguthelawayeka Almaty-Tashkent).
Ukuze labo abakhetha izindiza kufanele ukugibela indiza waya edolobheni Shymkent, futhi ukusuka lapho ukuya resort ngebhasi. Administration iphinde futhi yamukele izicelo ukulethwa nesihambeli noma iqembu izivakashi ngokuhlela umhlangano wabo nalowo omele yokungcebeleka kwesokudla emsamo noma esikhumulweni sezindiza.
City Samara amahhotela: amakheli, izinombolo zocingo, ukubuyekezwa
Ihhotela Gardenia Plaza Resort 4 *: Uhlolojikelele, incazelo kanye nokubuyekeza. Gardenia Plaza Resort & Aqua Park: incazelo kanye nokubuyekeza
Uma imvubelo inhlama kungahlali - yini okumele ngiyenze? iseluleko esisebenzayo
I5-6400: Overclocking. Sibutsetelo processor yesihlanu Core i5-6400
Daria Bakulin. amasu lombhali isisindo ukulahleka
Ukubala izindleko njengengxenye yangaphakathi yebhizinisi nokwenza
Indlela yokutshala kulamula ekhaya futhi uthole isivuno
Ukubalwa inzuzo esekelwe indlela yezindleko abekelwe emaceleni Kwabiwa indlela